Mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee Photoshop wuxuu ku yimaadaa nooca iPad-ka | Abuurista khadka tooska ah
Muddo ka hor adiga waxaan ogeysiinay wararka muhiimka ah laga bilaabo 'Cloud Cloud', oo hadda xoogga la saarayo Laba Astaamood oo Cusub oo waaweyn oo loogu talagalay Adobe Photoshop-ka iPad-ka: gooladaha iyo xasaasiyadda cadayga.
Laba sifo oo muhiim ah oo caan ah in hadday suurtagal tahay waxay u soo dhowaynayaan nooca iPad-ka midka aan ku haysano desktop-ka. Ma jiraan wax laga yiraahdo gooladaha taasina waa mid ka mid ah astaamaha ugu wanaagsan ee lagu garaaco barta marka aan dib u cusbooneysiinno midabka iyo qiimaha codka muuqaal ahaan.
Maanta Adobe wuxuu ku dhawaaqay imaatinka gooladaha Adobe Photoshop oo ku saabsan iPad-ka. Shaqadan waxaan Waxay u oggolaaneysaa hagaajinta gaarka ah midabka sawirka iyo codka; Waxaan ka hadleynaa farqiga, dhererka, isbarbardhiga sare, hooska, iyo isku dheelitirka midabka.
Tan hore nooca waxaa ka mid ah hagaajinta qalooca codka ee dhammaan kanaallada, xulashada noodo badan iyo fursado cusub oo ka weyn oo uu abku ku aqoonsado markaad rabto inaad gujiso oo aad farta ama burushka ku jiiddo noodh. Waqtigan xaadirka ah waa inaan sugnaa sugitaanka tirooyinka si loo caddeeyo dejimaha, oo si ballaaran ayaa loogu isticmaalaa dusha sare. Adobe ayaa ku dari doona dhawaan.
Iyadoo cusbooneysiintaas mustaqbalka sidoo kale waxaa ku jiri doona qalab indho fiiqis leh. Inbadan ayaa harsan. Adobe ayaa sidoo kale lagu daray hagaajinta xasaasiyadda cadayga ee cusboonaysiinta Photoshop on iPad. Waxay ka soo aruuriyeen jawaab celin isticmaaleyaal badan oo "dareemay" inay si aad ah u riixayaan inay sameeyaan istaroog gaar ah.
Marka waad awoodaa si fiican u hagaaji "tallaalka" garaacis aad u xasaasi u ah taabashada iyo in sida xaqiiqada ah in dad badani ay ku raaxeysan doonaan sawiradooda iyo hal abuurkooda. Hadda waxaa jira slider oo noo oggolaanaya inaan ka beddelno iftiinka una beddelo cadaadis "ka xoog badan".
back Tilmaamo cusub oo muhiim ah si loo siiyo baalal Adobe Photoshop-ka iPad-ka taasna durba waxay qaadanaysaa waqti in la isticmaalo haddii aad barnaamijkan weyn ku hayso miiska Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Wareegyada cadayga iyo dareenka waxay ku yimaadaan Adobe Photoshop on iPad
Warka Adobe Fresco, barnaamijka si loo dareemo taabashada "buraashka"